E Nwetala M Ihe Nrite Kacha Ihe Nrite Niile—Onye Ji Ịkụ Tenis Mere Aka Ọrụ
GỤỌ NKE Abua Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Belize Kriol Bicol Bislama Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Edo Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabuverdianu Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Maya Mingrelian Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tsonga Turkish Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Waray-Waray Welsh Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
E Nwetala M Ihe Nrite Kacha Ihe Nrite Niile
Akụkọ Veli Paloheimo Kọrọ
AFỌ A MỤRỤ M: 1967
EBE M SI: FINLAND
NDỤ M BIRI: ONYE JI ỊKỤ TENIS MERE AKA ỌRỤ
A mụrụ m na Finland, n’otu ime obodo a na-akpọ Tampere. Ndị ezinụlọ anyị abụghị ndị oké chọọchị, ma ha ejighị ihe gbasara agụmakwụkwọ na ịkpa àgwà ọma egwuri egwu. Mama m bụ onye Jamani. Mgbe m dị obere, m na-adị aga ebe nne na nna m ochie bi na West Jamani, mụ na ha anọtụ.
Ime egwuregwu na-atọ m ụtọ kemgbe m bụ obere nwa. N’oge ahụ, m mere egwuregwu dị iche iche, ma mgbe m dị ihe dị ka afọ iri na anọ, m kpebiri na egwuregwu m ga-abụzi naanị tenis. Mgbe m dị afọ iri na isii, m na-aga amụgharị otú e si akụ tenis ugboro abụọ ma ọ bụ atọ kwa ụbọchị. Mụ na koochi m na-aga ugboro abụọ n’ụbọchị, ná mgbede mụ agazie sọọsọ m. Nkà dị iche iche e nwere n’egwuregwu tenis na-atọgbu m atọgbu. M na-eji ịkụ tenis eme onwe m obi ụtọ, jirikwa ya emega ahụ́. Ọ bụ eziokwu na mụ na ndị enyi m na-anọ mgbe ụfọdụ ṅụtụ mmanya, o nweghị mgbe m nwere nsogbu n’ihi ịṅụ ọgwụ ọjọọ ma ọ bụ ịṅụ oké mmanya. Naanị ihe m na-eche bụ ịkụ tenis. E nweghị ihe dị m ka ya.
M malitere iso n’asọmpi ndị bụ́ ọkaibe n’ịkụ tenis, a na-akpọ ATP, mgbe m dị afọ iri na asaa. * Mgbe m meriri n’asọmpi ụfọdụ m so mee, aha m bịara dewe ude n’obodo anyị. Mgbe m dị afọ iri abụọ na abụọ, esozi m ná mmadụ iri ise kacha akụ tenis n’ụwa niile.
M gara mba dị iche iche n’ụwa kụọ tenis ruo ọtụtụ afọ. Ahụrụ m ụfọdụ ebe ndị mara ezigbo mma n’ụwa. Achọpụtakwara m na ọtụtụ nsogbu ndị dị ka, ime mpụ, ịṅụ ọgwụ ọjọọ nakwa imetọ ebe obibi, zuru ebe niile n’ụwa. Dị ka ihe atụ, mgbe anyị gara Amerịka, e nwere ebe ụfọdụ a gwara anyị agala n’ihi ọtụtụ ihe ọjọọ a na-eme ebe ndị ahụ. Ihe a niile mere ka obi na-ajọ m njọ. N’agbanyeghị na tenis m na-akụ na-atọ m ụtọ, o meghi ka m na-enwe obi ụtọ.
Enyi m nwaanyị na Ndịàmà Jehova malitere ịmụ Baịbụl. Achịtụrụ m ha ọchị, ma akwụsịghị m ya ịmụ Baịbụl. Anyị lụrụ n’afọ 1990, e mekwara ya baptizim n’afọ ọzọ ya. Mụnwa abụghị onye chọọchị, ma ekweere m na Chineke dị. M chetara na mama nnukwu m, bụ́ onye Jaman, na-agụkarị Baịbụl. Ọ kụzidịịrị m otú e si ekpe ekpere.
Otu ụbọchị, mụ na Sanna nwunye m gara na nke otu di na nwunye bụ́ Ndịàmà Jehova. Di nwaanyị ahụ aha ya bụ Kari gosiri m amụma Baịbụl nke kwuru banyere “oge ikpeazụ.” (2 Timoti 3:1-5) Nke a tụrụ m nnọọ n’anya. Ma o mere ka m ghọta ihe mere imi na anya ji dị ụwa otú ọ dị ya ugbu a. N’ụbọchị ahụ, anyị ekwuchaghị ọtụtụ ihe banyere okpukpe. Si n’ụbọchị ahụ gawa, mụ na Kari bidoro kwuwe ihe banyere Baịbụl. Ihe ndị m na-amụta bụ nnọọ eziokwu. Ihe ndị m na-eme, nakwa ọtụtụ njem m na-eme mere ka anyị ghara ịna-amụ ihe mgbe niile. Ma, o meghị ka ike gwụ Kari ịmụrụ m Baịbụl. Kama, ọ na-edetara m akwụkwọ ozi iji zaa ajụjụ ndị m jụrụ ya n’oge anyị na-amụ ihe. Baịbụl zara ajụjụ niile dị mgbagwoju anya mmadụ nwere ike ịjụ gbasara ndụ. M jikwa nwayọọ nwayọọ na-aghọta isi ihe Baịbụl na-ekwu, ya bụ, na Alaeze Chineke ga-eme ka uche Chineke mezuo. Aha Chineke m mụtara nakwa ịhụ ihe ndị o meerela anyị ruru m n’obi. (Abụ Ọma 83:18) Nke kacha ruo m n’obi bụ ihe mgbapụta o nyere anyị. O nyeghi ya naanị iji mezie ihe e mebiri ma ọ bụkwanụ iji mezuo iwu, kama ọ bu iji gosi na ọ hụrụ anyị n’anya. (Jọn 3:16) Amụtakwara m na m nwere ike ịbụ enyi Chineke, ma dịrị ndụ ebighị ebi na paradaịs nke udo ga-adị na ya. (Jems 4:8) M malitere ịjụ onwe m, sị “Olee ihe m ga-eme iji gosi na obi dị m ụtọ?”
M bịara chebara ụdị ndụ m na-ebi echiche. Amụtara m na Baịbụl na ihe kacha eme ka mmadụ na-enwe obi ụtọ bụ inye ihe. Achọkwara m ịgwa ndị ọzọ ihe ndị m kweere. (Ọrụ Ndịozi 20:35) Ebe m ji ịkụ tenis mere aka ọrụ, m na-eji ihe dị ka narị ụbọchị abụọ n’afọ aga akụ tenis n’ebe dị iche iche. Oge ndị m ji anata ọzụzụ n’ịkụ tenis, ihe ndị m na-eme kwa ụbọchị, nakwa tenis m na-akụ anaghị enye m ohere ilebara ezinụlọ m anya. M chọpụtara na m kwesịrị ịhapụ ihe ụfọdụ m ji oge m na-eme.
Ama m na ọtụtụ ndị agaghị aghọta ihe mere m ga-eji ahapụ ịkụ tenis m na-enweta ezigbo ego na ya maka ihe gbasara okpukpe. Ma, ohere m nwere ịmatakwu Jehova nakwa inweta ndụ ebighị karịrị ihe ọ bụla m nwere ike irite n’ịkụ tenis. N’ihi ya, o sirighị m ike ikpebi ihe m ga-eme. M kpebisiri m ike na o nweghị ihe ga-eme ka m laghachi azụ n’ime ihe m kpebiri, ihe ọ sọkwara ndị mmadụ kwuo. Amaokwu Baịbụl gbara m ume ịkwụsi ike ná mkpebi a m mere bụ Abụ Ọma 118:6. Ebe ahụ sịrị: “Jehova nọnyeere m; agaghị m atụ egwu. Gịnị ka mmadụ pụrụ ime m?”
Mgbe obere oge gachara, ụfọdụ ndị na-akwado anyị kwere m nkwa ịkwụ m ezigbo ego nke ga-eme ka m nọgide na-akụ tenis ruo ọtụtụ afọ ma ghara ịna-echegbu onwe m. Ebe ọ bụ na ekpebiela m ihe m ga-eme, ekweghị m anara ọrụ ahụ. M mechakwara kwụsị ịkụ tenis n’òtù ATP ahụ m nọ na ya. M nọgidere na-amụ Baịbụl, e meekwa m baptizim n’abalị abụọ n’ọnwa Julaị afọ 1994, mụ aghọọ Onyeàmà Jehova.
O nweghị ihe ike mere m nke mere ka m chewe banyere Chineke. M gaghịkwa ekwu na m nọ na-achọ ịmụta eziokwu ndị dị na Baịbụl. M lere onwe m anya ka onye ihe niile zuuru. Ma, achọpụtara m na e nwere ihe ndị bara uru mere anyị ji dịrị ndụ, chọpụtakwa na ndụ m akakwuola mma otú m na-atụghị anya ya. Ọ dị ka à ga-asị na eziokwu dị na Baịbụl nọ na-eche m ka m chọta ya. Ezinụlọ anyị akakwuola mma, anyị adịkwuokwa n’otu. Obi dịkwa m ezigbo ụtọ na ụmụ m ndị nwoke atọ sokwa m na-efe Jehova, kama ịbụ ndị na-akụ tenis.
Ịkụ tenis ka na-atọ m ụtọ. Ihe m ji na-akpa afọ ezinụlọ anyi kemgbe ọtụtụ afọ ugbu a bụ ihe gbasara ịkụ tenis. Ana m akụziri ndị mmadụ otú e si akụ tenis, bụrụkwa manịja n’ebe a na-akụ tenis. Ma, ejighizi m oge m niile na-eme egwuregwu. Na mbụ, m na-eji ọtụtụ awa kwa izu na-amụ otú m ga-esi bụrụ aka ochie ma ọ bụ azụ eru ala n’ịkụ tenis. Ma ugbu a, abụzi m onye na-ezisa ozi ọma oge niile. Obi dịkwa m ụtọ iji oge buru ibu na-enyere ndị ọzọ aka ịmụ Baịbụl nakwa ime ihe ndị Baịbụl kwuru, bụ́ ihe ndị nyeere m aka ịgbanwe ndụ m. Ma, ihe kacha eme ka obi na-atọ m ụtọ bụ na eji m adị ná mma mụ na Jehova Chineke kpọrọ ihe, na-akụzikwara ndị ọzọ gbasara olileanya magburu onwe ya m nwere maka ọdịnihu.—1 Timoti 6:19.
^ par. 3 ATP bụ aha ọzọ a na-akpọ òtù jikọtara ndị niile ji ịkụ tenis mere aka ọrụ. Ọ bụ ya na-ahụ maka asọmpi nke ụmụ nwoke ndị ji ịkụ tenis mere aka ọrụ. Ihe ọzọ bụ na ndị bụ́ aka ochie n’ịkụ tenis na-anọ na ya asọ mpi onye ga-akacha mee nke ọma. Mgbe ha na-akụ tenis, a na-agụ akara ole onye nke ọ bụla nwetara, nyekwa ndị kacha mee nke ọma ihe nrite. Ọ bụ akara ole mmadụ nwetara n’ebe dị iche iche ọ kụrụ tenis ga-ekpebi ma ọ̀ ga-abụ onye nke mbụ, onye nke abụọ ma ọ bụ karịa ná ndị na-akụ tenis n’ụwa niile.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ E Nwetala M Ihe Nrite Kacha Ihe Nrite Niile
ijwcl isiokwu 5